Malunga nathi -I Jiangsu Iigusha ezintathu zeMveliso zeGadi Co, Ltd.
I-Jiangsu Iigusha ezintathu zeMveliso zeGadi Co., Ltd. ibekwe e-Changzhou, kwiphondo lase-Jiangsu, e-China, ngololiwe ohamba ngesantya esiphezulu e-Shanghai. Izikhululo zeenqwelo moya ezimbini malunga nemizuzu engama-40 ukuqhuba kufutshane.
Singabantu ukwenziwa kunye nomrhwebi kuluhlu olubanzi lwezinto zeplastiki ezinjenge-Anti Bird Netting, i-Plastic Trellis, i-Plant Support Netting, i-Gutter Guard Mesh, i-Sleeve Netting, i-Deer Fence, i-Pea kunye ne-Bean Netting, i-Anti Hail Netting, i-Insect Netting, i-net net, izincedisi njl.
Umzi-mveliso wafunyanwa ngo-2008, kwaye uneminyaka eli-13 yokuvelisa amava e-odolo yokuthumela ngaphandle. Inikwa yimigca engama-20 yemveliso kwaye ngoku iyanda. Ngaphandle komgangatho weemveliso, Sikwaqhoboshela ukubaluleka kuphuhliso kunye nezinto ezintsha, ngakumbi ekuphuhliseni izinto ezahlukeneyo zeplastiki kunye nokuyila iindlela zokupakisha ezingcono zokuhlangabezana neemfuno zamasiko. Iimveliso zethu zithunyelwa kuwo onke amazwekazi amathandathu ngaphandle kwase-Antarctica, kwaye singomnye wabanikezeli abathembekileyo bevenkile enkulu. Siya kuhlala sinombulelo ngalo naluphi na unxibelelwano kuthi.
I-Jiangsu Iigusha ezintathu zeMveliso zeGadi Co, Ltd.
1, umzi-mveliso oneBSCI, ugunyaziso lweSedex.
2, ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza.
3, iisampulu zasimahla ziyafumaneka.
I-4, iindlela zeFlexible package zihlangabezana neemfuno zabathengi.
5, ulawulo lomgangatho olungqongqo.
I-6, i-OEM kunye ne-ODM iyafumaneka.
Iminyaka esi-7, 13 yomthengisi wamaziko egadi, abathengisi bemveliso yegadi, iAldi, iLidl, iTesco, iAuchan, iWalmart, ixabiso lokuLungisa, kunye nezinye iintlobo zabathengi.
8, Unokukhetha iintlobo ngeentlobo zeminatha yegadi.